Muuri News Network » Harry Redknap Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guuleysan Karta EPL-ka & Hal Sabab Oo Arsene Wenger Uu Ku Weyn Karo Shaqadiisa Arsenal
Harry Redknap Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guuleysan Karta EPL-ka & Hal Sabab Oo Arsene Wenger Uu Ku Weyn Karo Shaqadiisa Arsenal
Aug 6, 2016 - Comments off
Macalinkii hore Tottenham Hotspur ayaa saadaal ka bixiyay kooxda ku guuleysan karta horyaalka Premier League-ga xagaagan dhawaan bilaaban doona, isagoo sidoo kale sharaxay hal sabab oo uu Arsene Wenger ku weyn karo shaqadiisa Gunners.
Harry ayaa aaminsan in kooxda Manchester City ay hanan karto horyaalka Premier League-ga xagaagan, isagoo sidoo kale sheegay in Arsene Wenger uu shaqadiisa weyn doono hadii Gunners ay ku dhameysan weyso kaalinta afaraad ee horyaalka xagaagan.
“Manchester City ayaa ku guuleysan karta. kadibna waxaa soo raaci doona Arsenal, Chelsea Iyo Tottenham” Ayuu yiri Harry Redknapp oo meesha ka saaray in Man United, Liverpool & Leicester ay ka mid noqon doonaan afarta ugu sareysa.
“Arsenal 20-kii sano ee lasoo dhaafay afarta ugu sareysa ma seegin. hadiise Arsenal ay ku dhameysan weyso, dhab ahaantii waa xili ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Wenger. Weyna soo afjareysaa waayahiisa hadii uusan Afarta ugu sareysa u hogaamin. waa iney afarta ugu sareysa yimaadaan”
Dhanka kale Harry Redknapp ayaa amaanay shaqada cajiibka leh ee uu Antonio Conte kasoo qabtay kooxaha Serie A-da iyo waqtigiisa gaaban ee Azzurri.
“Conte wuxuu qabtay shaqo cajiib ah markii uu joogay Italy, sidoo kalana shaqo weyn ayuu xulka Italy ku qabtay, waxey ahaayeen kuwo wanaagsan koobkii Euro 2016, sidaas darteed waa saxiix weyn. balse lama aysan imaan mid ka weyn Pep Guardiola oo yimid Manchester City, Conte ayaa yimid Blues, halka Jose uu yimid United”
“Waa wax aan la aamini karin iney wadankaan wada joogaan. dhamaantood waxey maamuli doonaan Premier League. taasna waxey Premier League-ga ka dhigeysaa mid xiiso leh, balse marka ugu dambeysa hal qof ayaa noqon doona guuleystaha. Dhamaantoodna waxey rajeyn doonaan iney ku guuleystaan sanadka xiga. sababtoo ah dhamaantood wey is qarash gareeyeen, macalimiin waaweyn iyo ciyaartoy waaweynna wey keensadeen”
Ugu dambeyntiina Harry Redknapp ayaa sidoo kale Liverpool aan u ogolaan iney ka mid noqon karto afarta ugu sareysa, balse wuxuu sheegay hadii Klopp uu isku daygaas sameeyo iney xili ciyaareed cajiib ah u noqon doonto Reds.